Dab dhaliyay Khasaare Dhaawax iyo Burbur Hanti oo ka kacay magaalada Gaalkacyo – SBC
Dab dhaliyay Khasaare Dhaawax iyo Burbur Hanti oo ka kacay magaalada Gaalkacyo
Posted by Webmaster on Aktoober 8, 2011 Comments
Sida uu ku soo waramayo wariyaha SBC International ee magaalada Gaalkacyo waxaa maanta magaaladaasi ka kacay dab khasaare baaxadleh u geystay guryaha xero dad qaxooti ay ku jireen oo ku taala dhinaca maamul goboleedka Galmudug.
Xerada uu ka kacay dambkani waxaa lagu magacaabaa Buulo jawaan, waxaana degenaa qoysas aad u farabadan oo ka soo barakacay gobolada Koonfureed ee dalka .
Dabkan ayaa dhamaan dhulka dhigay guryihii xeradaasi ku yiilay iyadoona ay halkaasi ugaga gubteen waxii agab ahaa ee ay ku heysteen dadka ku jiray xeradaasi.
ku dhowaad 6 qof oo laba ka mid ahi tahay caruur ayaa la sheegayaa in dabkani uu ka soo gaaray khasaare dhaawac ah, waxaana mar aynu wax ka weydiinay qaar ka mid ah dadkaasi ay noo sheegeen in khasaaruhu u badanyahay gubniin soo gaaray dadkani.
Lama yaqaan ilaa iyo hada waxa uu ka dhashay dabkan baabi’iyay xerada buulo jawaan Gaalkacyo, waxayna qaarkood dadka xeradaasi degenaa oo aan wax ka weydiinay sheegeen in markii ugu horeysay dabkan uu ka soo bilowday aqal ku yiilay bartamaha guryaha kaas oo aan la ogeyn waxa dabka ka kiciyay.
Sikastaba ha ahaatee dadkan soo barakacay ayaa ay dhamaantood yihiin kuwo iminka ku soo dhacay banaan cad ka dib markii ay ka basbeeleen hantidii yareed iyo guryihii bacaha ka sameysnaa ee ay isku kab kabteen, waxayna sida ugu dhaqsiyaha badan ugu baahanyihiin gargaar lala soo gaaro.
SBC International Gaalkayco.